५ जनाको मुठ्ठिमा पुग्यो जसपा : केन्द्रिय समिति गठनमा बढयो विवाद « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
५ जनाको मुठ्ठिमा पुग्यो जसपा : केन्द्रिय समिति गठनमा बढयो विवाद
३१ भाद्र २०७७, बुधबार ००:००
जनता समाजवादी पार्टी भित्र केन्द्रीय समिति गठनमा विवाद भइरहेको खबर छ । तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको पाँच महिना पुगे पनि विवादकै कारण केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन् ।
जसपामा अहिले भने अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेतात्रयमा अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो रहेका छन् । भने अध्यक्षमण्डलको सिस्टम हटेर यतिबेला पुरै पार्टी यहि ५ जनाको मुठ्ठिमा पुगेको चर्चापरिचर्चा सुरु भएको छ ।
यहि ५ जना पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय बनाईएको र आवश्यक गृहकार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन तथा नेताहरुको वरियता टुंगो लगाउँन अधिकार दिएको हो यसै समुहद्वारा हुँदै आएको छ ।
तत्कालिन राजपा नेपालको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नका लागि अध्यक्ष मण्डलमा रहेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवको बैठक पटक पटक बसेपनि कुनै सहमती भने हुनसकेको छैन ।
जसपा स्रोतका अनुसार ठाकुर र महतोले आफूसंग एक सय आठ राखेर महेन्द्र र भण्डारीलाई ४०/४०, राजकिशोर र अनिललाई २७/२७ सदस्य दिने गरी भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावमा महेन्द्र, राजकिशोर र अनिलको असहमती छ ।
महेन्द्र, राजकिशोर र अनिलले ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर अन्य चार नेताको कोटा बढाउँनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर महेन्द्र र भण्डारीलाई ५२/५२, अनिल र राजकिशोरलाई ३८/३८ हुनुपर्ने प्रस्ताव असन्तुष्ट समुहले राखेका छन् ।
छलफलमा अनिल र भण्डारी सहभागि भएनन् । जसपा नेतृ एवं पत्नी डिम्पल झाको उपचारका लागि अनिल नयाँ दिल्लीमा छन् । यस्तै भण्डारी बिरामी भएकाले घरमै आराम गरिरहेका छन् ।
भण्डारीले दुई मध्ये जुन प्रस्तावमा सहमती भए आफू त्यसैमा सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आएका छन् । ठाकुर र महतोले आफूहरुको तत्कालिनन पार्टीको संगठन गाउँ गाउँ सम्म रहेकाले सोही अनुसार सदस्य संख्या अरु भन्दा बढी नै हुुनुपर्ने अडानमा छन् ।
दुई पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा समेत ठाकुर र महतोले मनोमानी गरेको आरोप महेन्द्र, अनिल, राजकिशोरले लगाउँदै आएका छन् ।
जसपा अध्यक्ष समेत रहेका ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले पुर्व सहमती अनुसार सदस्य संख्या आफूहरुका लागि नछुटयाएको आरोप लगाउँदै छुटै नामावली तयार गर्ने असन्तुष्ट नेताहरुले जनाएका छन् ।
तत्कालिन राजपाको केन्द्रीय सदस्य आठ सय ६१ थियो । तर अहिले उसले तीन सय ५० केन्द्रीय सदस्य छान्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वलाई मिलाउँन सकस भएको छ ।
समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य चार सय ३१ रहेको थियो । केही निष्कृय तथा केही दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले उसलाई केन्द्रीय सदस्य छान्न सजिलो छ ।
प्रकाशित मिति: Sep 16, 2020
सहिदको सपनासँग खेलवाड गरे, सर्पभन्दा विषालु मधेसी नेतालाई फ्याँक्नुपर्छ : सीके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सर्पभन्दा विषालु बनेका मधेसी नेतालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।